Madaxweynaha Somaliland Oo Booqday Safaaradda Somaliland Ku Leedahay Dalka Jabuuti
Jabuuti (TNN) :- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Weftigii uu h oggaaminayey oo maalintii shanaad ku sugan dalka Jabuuti oo halkaasi u joogay hawlo shaqo ayaa ma anta booqday safaaradda Somaliland ay ku leedahay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti.
Waxaana madaxweynaha warbixin halkaa ku siiyey safiirka Jamhuuriyadda Somaliland u qaabilsan dalk a Jabuuti Amb. Cabdifataax Siciid Axmed oo ay wehelinayaan safiir ku xigeenka, Amb. Cabdilaahi Xaaji Suldaan iyo hawl-wadeenada safaaradda, isagoo ku dheeraaday mudadii uu safiirku joogay wixii u qab soomay.
Geesta kale maareeyaha dekedaha Jabuuti ayaa sharaxaad ka siiyey Madaxweynaha Somaliland iyo w eftigiisa aaga cashuuraha ka caagan ee Free Żonę-ka